UDavid Saltmiras Archives - I-US Ilungelo Lokwazi
Usuku Lokulinga Nejaji Lucishiwe
Posted on Mashi 14, 2019 by UGary Ruskin
Phakathi kwezinto okufanele kuxoxwe ngazo, abameli bommangali bavuselela isicelo sabo ukuze bakwazi ukwethula ubufakazi ngemizamo kaMonsanto yokudicilela phansi usosayensi waseFrance uGilles-Éric Séralini ngemuva kokushicilelwa yemiphumela yakhe yocwaningo yango-2012 mayelana namagundane ondliwe ngamanzi adonswe nge-Roundup. Amarekhodi angaphakathi eMonsanto akhombisa umzamo ohambisanayo wokuhoxisa iphepha laseSeralini, kufaka phakathi le ntambo ye-imeyili.
Ubufakazi bukhombisa “ukuthi indaba yaseSéralini ingumgogodla wokwehluleka kukaMonsanto ukuhlola kanye nemizamo yakhe yokukhohlisa umbono womphakathi,” kusho abameli baka-Edwin Hardeman. Futhi, bathi ngaphakathi ukufakwa kwabo enkantolo, "Ubufakazi buveza ukuthi uMonsanto uphendulile ocwaningweni ngokuzama ukubukela phansi nokuhlambalaza uDkt. Séralini, obubufakazi obengeziwe" bokuthi iMonsanto ayinandaba ukuthi umkhiqizo wayo empeleni unikeza abantu umdlavuza, "kepha" [ugxila] esikhundleni ukulawula imibono yomphakathi nokubukela phansi noma ngubani ophakamisa ukukhathazeka kwangempela futhi okuyikho ngale ndaba. ” ”
NgoLwesithathu, eChabria kuphinde kwabusa lobo bufakazi bemizamo kaMonsanto yokudicilela phansi i-International Agency for Research on Cancer ngemuva kokuthi ihlukanise i-glyphosate njenge-carcinogen engahle ikhishwe esigabeni sesibili secala ngoba senzeka ngemuva kokuphela kokusetshenziswa kukaHardeman's Roundup.
I-Monsanto Roundup Trial Tracker UBruce Hammond, UDan Goldstein, UDavid Saltmiras, U-Eric Sachs, UGilles-Éric Séralini, UJohn Swarthout